नेपालका विश्वविद्यालयबाट विदेशका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? - Himalayan Kangaroo
नेपालका विश्वविद्यालयबाट विदेशका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
मेलबर्न । नेपालबाट विदेशका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ । तर,त्यो विश्वविद्यालयमा भर पर्छ । विदेशका विश्वविद्यालयसँग टाइअप गरेका विश्वविद्यालयबाट क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ । अरुमा भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयले धेरै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध बढाएको कारण सजिलो छ ।
आफू वा कन्सल्टेन्सीमार्फत विश्वका मध्यमस्तरीय विश्वविद्यालयमा केस बेसमा क्रेडिट ट्रान्सफरकालागि प्रयास गर्न सकिन्छ । आइटी,म्यानेजमेन्ट,लिबरल आर्टस्,इन्जिनियरिङका केही विधामा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । मेडिकल,नर्सिङ लगायतमा भने गाह्रो हुन्छ । एक वर्ष नेपालमा पढेकोलाई ट्रान्सफर गर्न गाह्रो छ तर दुई वर्ष पढेकोलाई भने बेसमा गर्न सकिन्छ । धेरै राम्रा विश्वविद्यालयमा भने नेपालबाट ट्रान्सफर हुँदैन ।
नेपालका विश्वविद्यालय विश्वमा कम विश्वविद्यालयसँग कम टायअप भएकोले ट्रान्सफर गाह्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले खोलेका कलेजको ट्रान्सफर सजिलो छ । शिक्षण संस्थाले क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सक्छ । तर क्रेडिट ट्रान्सफर हुँदैमा भिसाको ग्यारेन्टी भने हुँदैन । विशेष कारण भएमा मात्र भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति पाएमा सजिलो हुन्छ ।
त्यसैले यदि विशेष कारण नभएमा नेपालबाट मास्टर्स गरेर मात्र अध्ययनकालागि विदेश जाँदा राम्रो हुन्छ । अहिले अध्ययन गर्न लागेको विषयमा उत्तीर्ण नभएमा क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर जान समस्या हुन सक्छ । यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
Previousराष्ट्रिय च्याम्पियनले पाएनन् नागरिकता, गृहमन्त्रीको आश्वासन मात्रै
Nextस्थानीय तहमा कुन दल कत्रो ? एमाले ४५, कांग्रेस ३४.१७ प्रतिशत
नेपाली समाजमा पुरुषमाथिको हिंसा बढ्दै,न्याय दिन कानून अपुग
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार ०२:५१
शहीद सप्ताह शुरु, पहिलो दिन शुक्रराजलाई श्रद्धान्जली
१० माघ २०७४, बुधबार ०५:००
२६ पुष २०७३, मंगलवार २१:२६
ओमानविरुद्ध टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपाल
२६ माघ २०७४, शुक्रबार ०८:१४